Scruffy Duck | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! Scruffy Duck | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
ကာတွန်းပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်လေးတွေကန့်သတ်မထားဘူးတဲ့အမျိုးအစားများမှာ. တောင်မှကျနော်တို့လူကြီးများအဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေလုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့ကိုမချစ်. သူတို့ဒါကြောင့်လူကြိုက်များနဲ့အလွယ်တကူသန်းပေါင်းများစွာမှအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. လောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားရန်ထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်အယူအဆယူခဲ့ slot နှစ်ခုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်. Scruffy ဘဲသင်ကစားခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခစျြလိမျ့မညျကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပျော်စရာ-ဖြည့်ဆောင်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒီအကောင်းဆုံး slot နှစ်ခုထီပေါက်ဂိမ်းထဲမှာ, ငါး reels ရှိပါတယ်နှင့် 25 လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြောင်း paylines. နောက်ခံ lotuses နဲ့ကောင်းတဲ့ရေကန်နှင့်သူ၏မျက်စိ blinking တစ်ရယ်စရာဖားဖြစ်ပါတယ်. နောက်ခံဂီတကာတွန်း style အမျိုးမျိုး, jazz လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ 25p စတင်ငွေပမာဏနှင့်အတူအလောင်းအစားနဲ့£ 250 တစ် max မှတစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်ဖျားကိုတက်သွားနိုင်ပါတယ်.
NetEnt, အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကဒီပျော်စရာဖြည့် slot ကဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအင်တာနက်ကိုဂိမ်း၏အရုဏ်ကတည်းကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခဲ့ရခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မြင့်ဂိမ်းနည်းပညာများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်.
In this cartoon themed best slots jackpots game there are four base symbols fromafamily of duck. The father dresses asabusinessman,amother isahousewife,ahigh school teenager andaschool going kid. The father pays you the most when five of his symbols land acrossapayline. သငျသညျချီးမြှင့်ကြသည် 400 times the stake then. The lower category symbols are J, K သည်, Q and the A of cards that appear in broken egg shells. The ugly duckling andafree spins symbol represent the two main bonus features of the game.
ရိုင်း Feature ကို: The ugly duckling is the wild symbol of this best slots jackpots game at it appears asaregular symbol when not part of winning set. But when it appears inawin combination, it expands to cover the entire reel. So chances of getting big and mega wins are more with wild symbol in this game. The more wild symbols the higher winning combinations.
အကျဉ်းချုပ်: With various bonus features and cartoon characters, ဒီအကောင်းဆုံး slot နှစ်ခုထီပေါက်ဂိမ်းကြီးတွေဆုလာဘ်နှင့်အတူဖျော်ဖြေရေးကမ်းလှမ်း.